Fiarovam-pirenena : Nasiam-panavaozana tanteraka ny Ozinina miaramila ao Moramanga
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2020 → septembre → 4 → Fiarovam-pirenena : Nasiam-panavaozana tanteraka ny Ozinina miaramila ao Moramanga
Redaction Midi Madagasikara 4 septembre 2020 0 Commentaire
Fikirizana sy fandrosoana ho an’ny Tanindrazana ! Mendrim-piderana tokoa raha ny vita hatreto ao amin’ny Ozininina miaramila ao Moramanga.
Nanomboka ny taona 1991 dia tsy nitsahatra nivoatra hatrany ity orinasa malagasy tantanin’ny eo anivon’ny Fiarovam-pirenena ity. Nanomboka ny taona 2016 teo no nomena « ainga vao » tanteraka izany, rehefa nisy ny tetik’asa fanaovazana tanteraka ity ozinina. Nanomboka tamin’ny fanatsaràna ireo fitaovana rehetra enti-miasa sy ireo foto-drafitr’asa maro isan-karazany tao amin’ity toerana izany. Efa vita tanteraka ireo asa ary efa mihodina tanteraka ny ozinina, taona vitsy lasa izay. Marihana fa ny resaka fampitaovana rehetra ilain’ireo mpitandro filaiminana, na eo anivon’ny Tafika na eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena eny an-kianja no hamboarin’ity ozinina ity. Ao anatin’izany ny fanamiana isan-karazany, indrindra fa amin’izao fisian’ny valan’aretina izao dia ireo fitaovana natao hiarovana manokana amin’izany, ny fanamboarana ireo zara-sakafon’ireo miaramila eny an-kianja (ration alimentaire), izay vita malagasy sy vokatra malagasy avokoa. Ary tetik’asa izay kasaina hatsangana ato ho ato ny fanamboarana vanja entina hampisain’ny sivily (afomanga)
Angovo. Tsy vitan’ireo fampitaovana ireo miaramila ihany anefa fa misehatra amin’ny resaka angovo ihany koa ity ozininina ity. Fantatra ary mahaleo tena tanteraka amin’ny angovo hampiasainy ny ozinina, na amin’ny resaka rano io na amin’ny resaka herinaratra. Namorona « central hydrolique » ho azy ireo manokana mihitsy mantsy ity ozinina ity, izay azo vinavinaina ho entina hamatsiana ireo fokontany manodidina azy. Toy izany ihany koa ny amin’ny resaka rano fisotro madio. Amin’ny alalan’ny toha-drano izay napetraka teny an-toerana, fisintomana izany amin’ny alalan’ny paompy hiakatra any amin’ny toerana misy ny ozininina dia miparitaka amin’ireo toerana rehetra ao anatin’ny faritra. Vina ihany koa hatreto ny hitaritana izany, ary hamatsiana hatrany ireo fokontany manodidina azy.
Tonga nijery ifotony sy nitsidika izany fiovana goavana nisy teo amin’ity ozinina izay reherahan’ny vita malagasy ity moa ny Filoham-pirenena, Andry Rajoelina omaly, niaraka tamin’ny Ministry ny Fiarovam-pirenena, ny Jeneraly Rakotonirina Richard. « Entina hampiroboroboana ny fiharian-karena eto amin’ny Firenena izy ity fa indrindra ihany koa entina hampandrosoana ny faritra manodidina azy, amin’ny alalan’ireo tetik’asa sosialy mifandraika amin’izany »